एक हूल निर्देशक विदेशी चलचित्रको अध्ययनमा | The New Blog from Chhorepatan,Pokhara
« Aamirs Body for Ghajini
I’ve worked very hard to acquire my well toned figure: Priyanka Chopra »
एक हूल निर्देशक विदेशी चलचित्रको अध्ययनमा
आफूले अभिनय गरेमध्येबाट हेर्नलायक पाँच चलचित्रको नाम लिनुपर्दा कुन-कुन रोज्नुहुन्छ ? कलिउडका सुपरस्टार नायक राजेश हमालका लागि यो अप्ठ्यारो प्रश्न हो । अभिनय गरेका १ सय ५० चलचित्रबाट उनी नाम खोज्छन् । निकैबेर घोत्लिँदासम्म जवाफ फुर्दैन । अन्ततः अनुत्तरति बन्छन् उनी । भन्छन्, “कतिपय राम्रा चलचित्र पनि बनेका छन् ।”
कुराले बौद्धिक भएको परचिय बाँडेका हमाल व्यवहारमा भने त्यस्तो लाग्दैनन् । १७ वर्षको अभिनय जीवनमा मनले खाएको एउटा चलचित्र पनि नपाउनु वा नहुनु दुर्भाग्य नै हो । हमाल मात्र होइन, अपवादबाहेक सबै निर्माता, निर्देशक वा कलाकारको नियति यस्तै छ ।
यतिबेलाका चल्तीका निर्देशकहरू को हुन् ? यसको जवाफचाहिँ गाह्राे छैन । दीपक श्रेष्ठ, शोभित बस्नेत र मदन घिमिरेसँग सबैभन्दा बढी चलचित्र भएकाले व्यस्त उनै छन् । यी निर्देशकका चलचित्रले व्यावसायिक रूपमा निर्मातालाई अप्ठ्यारोमा नपारेका कारण सक्रियता कायम रहेको वितरकहरू बताउँछन् । उनीहरूका चलचित्र कस्ता हुन्छन् ? सन् ‘७० र ‘८० को दशकमा निर्मित बलिउडका चलचित्रको फोटोकपी गर्ने प्रयास गरन्िछ । यो यथार्थलाई निर्देशक बस्नेत नकार्दैनन् । भन्छन्, “पेट पाल्नुपर्छ । घाटामा जाने चलचित्र बनाउने हो र ? कुस्त पैसा कमाइएछ भने पछि कलात्मक चलचित्र बनाउनुपर्ला ।” यस वर्ष बस्नेतका तीनवटा चलचित्र प्रदर्शनमा आइसक्ने छन् । यी तीनै निर्देशकका रोजाइका अभिनेता हुन् एक मात्र राजेश हमाल ।
बलिउडका पुराना चलचित्रबाट नेपाली बनाउन पल्किएका र चल्तीको निर्देशक भई खाएकाहरू विचारगोष्ठीमा रमाउँदैनन् । चलचित्र महोत्सवहरूमा सहभागी हुँदैनन् । संसार प्रसिद्ध चलचित्र पनि हेर्दैनन् । आखिर किन ? निर्देशक मदन घिमिरेका अनुसार फुर्सदै हुँदैन । भन्छन्, “काम लाग्ने खाले मात्र हेरन्िछ ।” अर्का निर्देशक दीपक श्रेष्ठ पनि दर्शकको स्वाद बुझेर चलचित्र बनाउने बताउँछन् । भन्छन्, “जहाँसुकैको फोटोकपी होस्, पहिलो नम्बर चलचित्र चल्नुपर्छ ।”
त्यसो त चलचित्र उद्योगमा श्रेष्ठ, बस्नेत र घिमिरेकै पथमा हिँड्नेको बाहुल्य छ । ०६४ मा प्रदर्शनमा आएका ३३ मध्ये ३० चलचित्र उनीहरूकै शैलीमा देखिए ।
व्यक्तिगत रूपमा यी तीनका चलचित्र व्यावसायिक हिसाबले तारपिmयोग्य नै भए । तर, आमचलचित्रको अवस्था त्यस्तो रहेन । ३३ चलचित्रका लागि १३ करोड ५० लाख रुपियाँ लगानी भए पनि फिर्ताचाहिँ १२ करोडमा सीमित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । वितरक मनोज राठीका अनुसार, यो घाटाको उद्योग हो । भन्छन्, “उद्योग ओरालोमा छ ।”
चलचित्र घाटाको उद्योग भएको प्रमाणित भइसक्दा पनि पुरानो विचारकाहरू भने राम्रो चलचित्र चल्ने तर्क गर्छन् । उनीहरूले यस्तो तर्क अघि साररिहेकै बेला नेपाली चलचित्र चल्ने बहुसङ्ख्यक हलहरू बन्द भएका छन् ।
स्थापित निर्माता तथा निर्देशकहरू पलायन भएका छन् । स्थापित चलचित्रकर्मी टाढा हुँदै गएका छन् । चलचित्र दासढुङ्गा निर्देशन गररिहेका युवा निर्देशक मनोज पण्डित अघिल्लो पुस्ताले विश्राम लिने बेला भइनसकेको बताउँछन् । भन्छन्, “उहाँहरूले पुस्ता हस्तान्तरण गरेर मात्र छोड्नुपथ्र्यो ।” अहिलेको चलचित्र उद्योगमा बोकाहरूबाट दाइँ भइरहेको उनको तर्क छ ।
चलचित्र उद्योगको अवस्थ्ाा चिन्ताजनक भए पनि केही आशाका किरणचाहिँ टल्किन थालेका छन् । निर्देशकहरूको एउटा डफ्फा यतिबेला अनुसन्धानमा छ । कुनैबेला विदेशी चलचित्र भनेर बलिउडमा सीमित हुने उनीहरू अहिले हलिउड र संसार प्रसिद्ध चलचित्र हेर्न थालेका छन् । चलचित्र निर्देशक समाजको छातामुनि समेटिएका उनीहरू प्रत्येक शुक्रबार एकै ठाउँ जम्मा भएर चलचित्र हेर्ने र विश्लेषण गर्ने अभियानमा छन् ।
पोहोर सालसम्म चलचित्र महोत्सव वा वृत्तचित्र महोत्सवमा नेपाली चलचित्रकर्मीको उपस्थिति शून्य हुन्थ्यो । आकाश अधिकारी, सुवास गजुरेल, शिव रेग्मी, मनोज पण्डित, केपी पाठक, राजेन्द्र उप्रेती, योगेश घिमिरे, विकास आचार्य आदि निर्देशकहरूले पछिल्लोपटक आयोजित महोत्सवमा नियमित रूपमा सहभागिता जनाए । भर्खरै सम्पन्न दक्षिण एसियाली वृत्तचित्र महोत्सव होस्, चाहे एक महिनाअघि सकिएको काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन फिल्म फेस्टिवल होस्, उनीहरूको सहभागिता उत्साहजनक थियो ।
उनीहरू खोजी तथा अनुसन्धानमा छन् भन्ने अर्को प्रमाण चलचित्र निर्देशक समाजसँग छ । छ महिनाअघि समाजले तीनदिने गोष्ठी सम्पन्न गर्‍यो नगरकोटमा । त्यो गोष्ठीमा ४५ चलचित्रकर्मी सहभागी थिए । तीमध्ये ५० प्रतिशत थिए निर्देशकहरू । समाजका अनुसार, त्यतिबेला उनीहरूलाई अनुरोध गरएिको थियो सहभागिताका लागि । फेर िसमाजले यही महिना सोही ठाउँमा तीन दिनकै अर्को गोष्ठी गर्दैछ । अहिले कसैलाई अनुरोध गरएिको छैन तर भाग लिने इच्छुकको सङ्ख्या अत्यधिक भएको समाजका महासचिव नीलहर िकाफ्ले बताउँछन् । भन्छन्, “४५ जना लाने कार्यक्रम छ तर ६० भन्दा बढीले जाने इच्छा देखाएका छन् ।”
निर्माण तयारीले पनि आशाको किरण देखिएको निर्देशकहरू बताउँछन् । मैना प्रदर्शनको मुखमा छ । यसले केही पि्रमियरबाटै राम्रो प्रशंसा बटुलिसकेको छ । निर्माता तथा निर्देशक केपी पाठक अर्को नयाँ चलचित्रको गृहकार्यमा जुटिसकेका छन् । उनले त बलिउड शैलीका ठिमाहा चलचित्र नबनाउने घोषणा नै गरेका छन् । भन्छन्, “मौलिक चलचित्रले पनि व्यवसाय गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण दिनुपरेको छ ।” त्यसैगरी, मनोज पण्डित डेढ दशकअघि दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको मृत्युको रहस्य खोतल्दैछन् । उनी छायाङ्कनका क्रममा छन् । चलचित्र नुमाफुङबाट स्थापित बनेका निर्माता तथा निर्देशक नवीन सुब्बा गुडवाई काठमाडौँ बनाउने गृहकार्यमा छन् ।
यस चलचित्रको पटकथा तयार भइसकेको नवीन बताउँछन् । गुडवाई काठमाडौँको पटकथा राजेश गोङ्गजुले तयार गरेका हुन् ।
फरक कथा, प्रस्तुति र प्रविधिमा सीमोस सुनुवारले मिसन पैसा नामक चलचित्र तयार गरेका छन् । यस चलचित्रप्रति युवावर्गले चासो लिइरहेको निर्माण पक्षको बुझाइ छ । मोफसलमा चलेर काठमाडौँ पस्ने तयारीमा बसेका दुई चलचित्र मुनामदन र बसाइले पनि चलचित्र वृत्तलाई तताउने त्यसका निर्देशकहरू बताउँछन् । मुनामदनका निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाका अनुसार बाहिरजस्तै उपत्यकाभित्र पनि यसले कीर्तिमान राख्छ । भन्छन्, “यो चलचित्र चल्यो भने यसले राम्राे माहोल बनाउँछ ।” बसाइका निर्देशक सुवास गजुरेल पनि राजधानीका दर्शकले बसाइलाई स्वीकार्ने बताउँछन् ।
पुरानै सूत्रमा तर स्तरीय बनेका केही चलचित्रले पनि चलचित्रवृत्त तताउने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यो दौडमा निर्देशक तुलसी घिमिरे अगाडि छन् । उनी आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी चलचित्र देशमार्फत सार्वजनिक हुँदैछन् । यस चलचित्रमा राजेश हमाल, निरुता सिंह, निखिल उप्रेतीलगायत चल्तीका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
त्यसैगरी गोपीकृष्ण मुभिजको निर्माण तथा निरक पौडेलनिर्देशित चलचित्र कुसुमे रुमालले सबैखाले दर्शक तान्नसक्ने विश्वासमा छ निर्माण पक्षको । नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठद्वारा निर्मित कहाँ छौ पनि आशा गरएिको चलचित्रमा पर्छ । राम्रो निर्देशकका रूपमा दरएिका उज्ज्वल घिमिरे पनि हाल भुलिगए पाप लाग्ला नामक चलचित्रको छायाङ्कनमा छन् । व्यावसायिक रूपमा सफल मानिएका निर्माता केशव भट्टराईद्वारा निर्मित यस चलचित्रबाट पनि यस क्ष्ाेत्रले आशा गरेको छ ।
चलचित्र क्ष्ाेत्रमा विगत वर्षहरूमा पनि आशातित अभियान र चलचित्रको चर्चा हुने गर्थे । तर, परण्िााम भने सकारात्मक आएको पाइन्नथ्यो । यसपटकचाहिँ निर्माता तथा निर्देशकहरू कथा-पटकथादेखि नै गृहकार्यमा जुट्न थालेको बताउँछन् । जेहोस्, निर्देशक नवीन सुब्बाको एउटा प्रश्नचाहिँ यस क्षेत्रमा सदाबहार छ । उनले सोधेका थिए, “एउटा विदेशीले नेपाली चलचित्र कस्तो हुन्छ भन्यो भने के जवाफ दिने ?”
चल्तीका नायक राजेश हमाल आफूले डेढ सय चलचित्रमा अभिनय गरसिक्दा पनि लायक चलचित्रको नाम लिन असमर्थ हुनु र नवीन सुब्बाको प्रश्नमा चलचित्र क्षेत्र अनुत्तरति हुनु सायद एउटै हो । सुब्बाको प्रश्नको जवाफ उद्योगले नभेटुन्जेलसम्म हमालले पनि नाजवाफ नै भइरहनुपर्ने छ । यतिबेला तातेका निर्देशकको ढिलै भए पनि घैँटामा घाम त लागेको छ तर के तमाम अनुत्तरति प्रश्नको जवाफ यिनीहरूले खोज्न सक्लान् ?
Posted in actress, kollywood | Tagged एक हूल निर्देशक विदेशी चलचित्रको अध्ययनमा | LeaveaComment